दृश्यावलोकन FSX मा थपियो
प्रश्न दृश्यावलोकन FSX मा थपियो
10 महिना6दिन पहिले #1185 by Duffys tavern
FSX गोल्ड, बक्से
सञ्झ्याल 8.1 मा स्तरवृद्धि पछि, मैले अन्तमा MSFS X लोड गर्न सकेन। तर मलाई एड-अन दृश्य फाइलहरू लोड गर्दा समस्या भएको छ। जब म विन्डोज एक्सपी अन्तर्गत FSX चलाइरहेछु, मेरो कुनै वास्तविक समस्या लोड हुँदै र एड-अन दृश्य फाइलहरू प्रयोग गर्न सकेन। तर सञ्झ्यालमा लोड भएपछि 8.1 चीजहरू पनि काम गर्न लाग्दैन, उदाहरणका लागि, एटीएलमा TOC हेंजरमा टायलर न्युपोर्टको "फ्ली डेल्टा जेट" चिन्ह। मैले यो जस्तै पहिले नै लोड भएँ तर यो देखा पर्दैन। यदि FSX मा 8.1 हो भने चीजहरू कसरी परिवर्तन हुन्छन्? के "बक्सेड, सुनको संस्करण" लाई सेवा पक्स 1 र2चाहिन्छ? कुनै पनि मद्दतको मूल्यांकन गरियो।
निम्न प्रयोगकर्ता (हरू) धन्यवाद भन्नुभयो: Niells618
9 महिना4सप्ताह पहिले #1188 by Gh0stRider203
FSX गोल्ड संस्करण FSX डिलक्स हो, एक्सेलेसन एड-अन प्याक PLUS। तपाइँसँग पहिले नै सेवा प्याकेज स्थापना नभएसम्म एक्सेलेरेशन एड-अन प्याकेज हुन सक्नुहुन्न।
सबै कुरा एकै ठाउँमा जान्छ किनकि यो सधैँ गर्छ, कुनै कुरा के तपाईको ओएस।
9 महिना3सप्ताह पहिले #1190 by Duffys tavern
मुरी मुरी धन्यवाद। राम्रो जान्नको लागी मलाई एसपी 1 र2को आवश्यकता छैन।